Iindaba - Iimveliso ezintsha eziphuhlisiweyo
Isilinda ivili brake Daihatsu 47550-87304, 47560-87302, 47570-87304, 47580-87302,47510-87304, 47520-87301, 47530-87304, 47540-87301 kunye clutch master cylinder 31410-87322 ziye zaphuhliswa ngoSeptemba, 2020. I-Daihatsu yindawo entsha yohlobo lwe-auto kuthi, intle kakhulu.
Ukubaluleka kophuhliso lweemveliso ezintsha sisiphumo sokunyanzeliswa kwemveliso ezintsha ukuba ishishini liya kuphila. Ngamanye amagama, ukuphuhliswa kwemveliso entsha kubotshelelwe kwisakhono seshishini sokuhlala sikhuphisana nakwimpilo ende yeshishini elinjalo. Naliphi na ishishini elingakuqondiyo ukubaluleka kokuphuhliswa kwemveliso entsha alinakuhlala ixesha elide njengesiphumo sokuba ishishini limalunga nokwenziwa kwezinto ezintsha kunye notshintsho, nto leyo eyenze ukuba kufuneke ukuba amashishini aqhelane nolu tshintsho ukuze luhlale lufanelekile. Uphuhliso lwemveliso entsha lunokujoliswa ekucingeni umbono omtsha ngokubhekisele kumgca omtsha ngokupheleleyo weemveliso okwangoku ezingekho kwimarike, okanye inokuthi ijolise ekuphuculweni kweemveliso ezisenokuba sezikho kwimarike. Nokuba imeko iyintoni na, ukukhula kweemveliso ezintsha kuyinxalenye ebalulekileyo yokusetyenziswa kwezicwangciso zeshishini ziinkampani.
Umzekeliso wokubaluleka kophuhliso lwemveliso entsha unokubonwa kwindawo yotshintsho ukusuka kwiincwadi ezibonakalayo ziye kwiincwadi ze-e. Ezinye iinkampani ezizakhele igama kunye nenkampani yazo yonke ekuthengisweni kweencwadi ezibonakalayo zikhawuleze zaphindwa ngenxa yokuba zisilele ekuboneni ukubaluleka kophuhliso lwemveliso entsha. Ezi nkampani azikhange ziqhubeke notshintsho kwezinye iindawo zentengiso, ezinje ngobuchwephesha obenze kwalula ngakumbi ukuba abantu bakhuphele iincwadi kwisixhobo kunokuba bathenge incwadi ebonakalayo. Ezinye iinkampani ezamkele uphuhliso lwemveliso entsha zilulindele olu tshintsho kwaye azenzelanga kuphela ukuba abathengi bakhuphele iincwadi kwiiWebhusayithi zabo, kodwa badibanise olu khuphelo kunye nabafundi babo be-elektroniki, bayenza ukuba ibe yipakethe epheleleyo. Oku kuqonda ukubaluleka kophuhliso lwemveliso entsha kugcine ezo nkampani zichaphazelekayo nokuba zijamelene nezinto ezintsha zetekhnoloji kunye nezinto ezithandwa ngabathengi. Omnye umzekeliso wokubaluleka kokuphuhliswa kwemveliso entsha kukwindawo yeefowuni ezifanelekileyo apho ezinye iinkampani ziye zakwazi ukuzibeka njengeenkokheli zentengiso ngenxa yokuba zihlala zikhokela kwiimveliso ezintsha. Ezi nkampani zihlala zivelisa iimveliso ezintsha ngamaxesha athile, zijonga ngokungathandabuzekiyo xa iimveliso zazo kwintengiso sele zifikelele esiphelweni sobomi bemveliso yazo. Ngokutshintsha iimveliso ezindala kunye nezintsha, bayakwazi ukugcina umdla wabathengi kunye nokwenza imveliso kunye nenkampani yabo ifaneleke.